स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि अनसनरत डा.केसी अस्पताल भर्ना - Health Today Nepal
स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि अनसनरत डा.केसी अस्पताल भर्ना
डडेल्धुरा,२३ कात्तिकः विभिन्न ७ बँदै माग राखी अनसनमा बसेका चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा.गोविन्द केसी स्वास्थ्यमा समस्या उत्पन्न भएपछि अस्पताल भर्ना गरिएको छ । सोमबारदेखि डडेल्धुरामा १७ औँ चरणको अनशन सुरु गरेका डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रँदै गएपछि उनलाई अस्पताल भर्ना गरिएको हो।
डा.केसीको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि शुक्रबार बेलुका डडेल्धुरा अस्पताल भर्ना गरिएको अस्पताल स्रोतले जनाएको छ । डा.केसीको रक्तचाप तलमाथि भइरहेकाले उनकै सहमतिमा अस्पतालमा भर्ना गरिएको सो अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा.जीतेन्द्र कँडेलले जानकारी दिएका छन् ।
प्रदेशसभा सदस्य कर्णबहादुर मल्ल र स्थानीय प्रसाशनको रोहबरमा डा. केसीलाई अस्पताल भर्ना गरिएको उनले जानकारी दिए । चिसोका कारण डा. केसीको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएको उपचारमा संलग्न चिकित्सकले जनाएका छन् ।
डा.केसीले अस्पतालबाटै अनशन जारी राख्ने बताएका छन् । डा. केसीले कात्तिक १८ देखि अनशन थालेका हुन् ।
Previous article डा.अरुणा उप्रेतिले यस कारण छोडिन ‘बलियो नेपाल’
Next article कान्ति बाल अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्न जुट्यो आर्थिक सहयोग